​टेलिकमको डाटामा नयाँ प्याकेज, १३० रुपैयाँमा २०० एमबी, एक जिबीको ५ सय रुपैयाँ
काठमाडौँ । नेपाल टेलिकमले पोस्टपेडमा नयाँ डाटा प्याकेज घोषणा गरेको छ। यसअघि डाटा प्याकेज लिन नजिकैको सेन्टरमा गएर फाराम भर्नुपरे पनि असोज २० गतेदेखि एसएमएसबाटै सहज रुपमा प्याकेज लिन सकिने..
काठमाडौँ । नेपाल केबुल टेलिभिजन सङ्घले सुरक्षाको प्रत्याभूत भए केबुल टेलिभिजनमा हिन्दी च्यानल सञ्चालन गर्न सकिने जनाएको छ। सङ्घले भारतीय च्यानल बन्द गरेको सन्दर्भमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले २४ घन्टाभित्र..
काठमाडौं । नेपालको प्रमुख टेलिकम्युनिकेशन कम्पनी एनसेलको मुख्य लगानीकर्ता टेलियासोनेराले नेपाल छाड्ने निर्णय गरेको छ । उसले एनसेलमा रहेको आफ्नो ८० प्रतिशत हिस्सा बेचेर नेपाल छाड्ने निर्णयमा पुगेको हो ।..
​२०औं वर्ष पुरा गरेको अवसरमा, वर्ल्डलिंकको ‘हाइस्पिड’ इन्टरनेटमा छुट
काठमाडौं । इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वल्र्डलिंकले हाइस्पिड इन्टरनेटमा उच्च छुटको घोषणा गरेको छ । कम्पनीले मंगलबारदेखि २०औं वर्ष पुरा गरेको अवसरमा यस्तो छुटको घोषणा गरेको हो । कम्पनीले नेपालभर फैलिएको..
​वल्र्डलिंकको २०औ वार्षिकोत्सव
काठमाडौं । इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनी वल्र्डलिंक स्थापनाको २०औँ वार्षिकोत्सव मनाएको छ । कम्पनीले वार्षिकोत्सव अवसरमा सिआरएसअन्तर्गत काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सामुदायिक स्कुलमा अध्ययनरत विद्याथीले इन्टरनेटका माध्यमबाट समग्र जानकारी, सूचना तथा सन्देश पाउन..
​गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न नेपाल टेलिकमलाई निर्देशन
काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसद्अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल टेलिकमलाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न निर्देशन दिएको छ । सिंहदरबारमा शुक्रबार बसेको समितिको बैठकले नेपाल टेलिकमको सेवा भरपर्दो र समयानुकुल हुन नसकेको निष्कर्ष..
​क्यास्परस्की एण्टीभाइरसका ४ नयाँ संस्करण सार्वजनिक
काठमाडौं । नेपाली बजारमा क्यासपरस्की एण्टीभाइरसको नयाँ संस्करण सार्वजनिक भएको छ । सागर ईन्फोसिसले अन्तरराष्ट्रिय एण्टी भाइरस कम्पनी क्यासपरस्कीको सहकार्यमा नयाँ संस्करणका रुपमा क्यासपरस्की एण्टीभाइरस २०१६, क्यासपरस्की ईण्टरनेट सेक्युरिटी २०१६, क्यासपरस्की..
काठमाडौं । मोबाईल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले आफ्ना कर्पोरेट ग्राहकका लागि ‘एनसेल बिज’ योजना ल्याएको छ, जस अन्तर्गत एनसेलका सम्पूर्ण कर्पोरेट ग्राहकले तीनवटा मासिक योजना – बिज २९९, बिज ४९९..
​२५० रुपैयाँमा युटिएलको ५६ दिनसम्म असिमित इन्टरनेट योजना
काठमाडौ । युनाइटेड टेलिकम लिमिटेडले दशैँ लगायतका चाडपर्वको अवसरमा मात्र २५० रुपैयाँमा ५६ दिनसम्म असिमितरुपमा इन्टरनेट चलाउन मिल्ने विशेष डाटा प्याक योजना ल्याएको छ। यो योजना अन्तर्गत यही भदौ १५ देखि..
काठमाडौँ । व्यवस्थापिका–संसद्, विकास समितिले नेपाल टेलिकमप्रति आमनेपालीको भरोसा रहेकाले सेवा, सुविधा र गुणस्तरलाई सुधार गर्न सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको आजको बैठकले अत्याधुनिक प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्न..
अन्नपूर्ण पोस्ट्को केन्द्रीय कार्यलयमा आक्रमण
काठमाडौं । राष्ट्रिय दैनिक अन्नपूर्ण पोस्ट्को तीनकुनेस्थित कार्यलय कर्पोरेट टावरमा आक्रमण भएको छ। बुधबार राति एक समूहले अन्नपूर्ण कार्यलय रहेको भवनको अगाडितर्फको शिसा फुटाएका छन् । सुरक्षागार्डका अनुसार करिब साढे नौ..
​एप क्याम्पका लागि एनसेलको छुट्टै एप
काठमाडौं । एनसेलले मोबाइल एप्स बनाउन चाहनेहरुको लागि आयोजन गरेको एप्स प्रतियोगीताको लागि छुट्टै एप उपलब्ध गराएको छ । उक्त इन्टरएक्टीभ एप एनड्रोइड भर्सनमा उपलब्ध छ । मोवाइल प्रयोगकर्ताहरु र एप..
​जिएसएम प्रिपेड मोवाइल फोनमा टेलिकमले ल्यायो सस्तो डाटा प्याक
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले मंगलबारदेखि लागू हुने गरी जिएसएम प्रिपेड मोवाइल फोनमा डाटा प्याकेज सार्वजनिक गरेको छ। टेलिकमले सार्वजनिक गरेको नयाँ प्याकेजलाई तीन प्रकारमा वर्गिकरण गरेको छ। ती प्याकहरु..
सरकारी स्वामित्वको ​टेलिकमको नाफा १३ अर्ब ८७ करोड
काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी नेपाल टेलिकमले आर्थिक वर्ष २०७१/०२ मा १३ अर्ब ८७ करोड २७ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको छ । जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा दुई..
रिसाएकी प्रेमिकालाई फकाउन यस्तो एप आयो!
एजेन्सी । अब रिसाएकी प्रेमिकालाई खुसी पार्नका लागि पुरुषहरुले नयाँ एपको सहारा लिन पाउने भएका छन्। प्रेमिका मात्रै नभई आफ्नी श्रीमतीलाई पनि फकाउन र हँसाउनका लागि यो एप उपयोगी हुने..
जनकपुर र लाहानमा डिस होमको सेवा केन्द्र विस्तार, ग्राहकलाई उत्कृष्ट सेवा दिने कम्पनीको दावी
काठमाडौं । डिस होमले आफ्नो सेवा विस्तारलाई तीब्रता दिँदं सोमबारबाट लाहानमा र मंगलबारबाट जनकपुरमा सेवा केन्द्र थप गरेको छ । डिस होमका महाप्रबन्धक रमेश सापकोटा र नायब महाप्रब्न्धक कल्याण अधिकारी..
काठमाडौं । विदेशी लगानीमा केवुल टेलिभिजन चलाउनु कानुन बिपरित रहेको भन्दै सीम टीभी प्रसार बन्द गराउन माग गर्दै परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । प्रधानन्यायधीश कल्याण..
काठमाडौं । एनसेलले ग्राहकहरुका लागि नयाँ बोनस योजना ल्याएको छ । जसअन्तर्गत एनसेलका प्रिपेड ग्राहकले हप्तामा दुई पटक सयको रिचार्ज गर्दा सय रुपैयाँ नै बोनस प्राप्त गर्नेछन् । आइतबारदेखि लागू गरिएको..
काठमाडौं । नेपालमा मोबाइल तथा टेलिफोन प्रयोगकर्ता शतप्रतिशत नाघेको छ । नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ०७१ चैत मसान्तसम्म विभिन्न सेवाप्रदायकबाट सिमकार्ड तथा टलिफोन लाइन लिनेको संख्या गणनाका आधारमा सार्वजनिक..
​राजधानीमा ७२ टेलिफोन टावर झिकिएपछि नेटवर्कमा चर्को समस्या
भीष्मराज ओझा काठमाडौ । विनाशकारी भूकम्पपछि राजधानीमा घरधनीको मागबमोजिम नेपाल टेलिकम, एनसेल र युटिएल कम्पनीका ७२ टेलिफोन टावर झिकिएपछि मोबाइल नेटवर्कमा समस्या देखिएको छ। भूकम्पका बेला अग्ला घरको छतमा जडान गरिएका टेलिफोनका..
काठमाडौं । उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले सिम्पल मिडिया नेटवर्क (सीमटीभी नेपाल)को अवलोकन गरेका छन् । शुक्रबार चाकुपाटस्थित कम्पनीको मुख्य कार्यालय अवलोकन गर्दै उनले नेपालको सञ्चार उद्योग सरकारी प्राथमिकतामा परेको बताए । मन्त्री..
काठमाडौं । एलाइड ट्रेड लिङ्क ईण्टरनेशनल प्रालिले कार्वनका चार नयाँ मोवाइल फोन सोमबार सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले कार्वन के१५ मेटल, के४०, के६९५ प्लस र म्याक वान मोवाइलहरु बजारमा सार्वजनिक गरेको..
सरकारले रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन गाभेरै छोड्ने
काठमाडौ । सरकारले सरकारी स्वामित्वका नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाललाई गाभेर सार्वजनिक प्रसारण सेवा गठन गर्ने प्रतिबद्धता फेरि दोहोर्‍याएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७१(७२ को बजेटमार्फत ती दुवै सञ्चार संस्थालाई..
​गुगल विश्वकै आकर्षक रोजगारदाता कम्पनी
एजेन्सी । गुगलले भत्ता र लाभांश दिने मामिलामा ख्याति कमाएको छ । यो कम्पनीले निःशुल्क खाना र सुत्केरीका लागि १८ साताको तलबसहितको बिदाका साथै राम्रो तलब दिने गरेको छ ।..
​सरकारी टेन्डरदेखि सूचि दर्तासमेतका काम-कारबाही विद्युतीय माध्यममार्फत हुने
काठमाडौ । सार्वजानिक खरिदसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारबाही अगामी साउन १ गतेदेखि विद्युतीय माध्यमबाट हुने भएको छ । यसका लागि सार्वजानिक खरिद अनुगमन कार्यालयले www.bolpatra.gov.np वेबसाइट कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । विभागले यसअघि..
​क्लासिक टेकका सेवा ६२ जिल्लामा बिस्तार
काठमाडौं । इन्टरनेट तथा नेटवर्क सेवा प्रदायक क्लासिक टेकले नेपालका ६२ जिल्लामा आफ्नो सेवा बिस्तार गरेको छ । एमपिलएस प्रणालीमा देशका ६२ जिल्लामा सेवा विस्तार गरेको क्लासिक टेकले अब प्रयोगकर्ताको..
​गुगलले ल्याउँदैछ यु ट्युब गेमिङ
यदि तपाइँ इन्टरनेटमा गेम खेल्नमा शौखिन हुनुहुन्छ भने खुसीको खबर छ । इन्टरनेट जाएन्ट गुगलले एक लाइभ स्ट्रिमिङ गेमिङ सर्भिसल्याउँदैछ । गुगलले उक्त गेमिङ वेबसाइट तथा एपको नाम यु ट्युब..
​एप्पल वाचले बनायो रेकर्ड, दुइ महिनामै बने ६ हजार एप
एजेन्सी । बजारमा आएको दुइ महिना नबित्दै एप्पल कम्पनीको स्मार्टवाचले किर्तिमान कायम गरेको छ । स्मार्टवाचले घडीमा प्रयोग हुने एपहरुको संख्यामा भएको वृद्धिको आधारमा रेकर्ड कायम गरेको हो । एप्पल वाच..
​ब्ल्याकबेरीले पहिलोपटक एन्ड्रोइड मोबाइल सार्बजनिक गर्ने
काठमाडौं । ब्ल्याकबेरीले पहिलो पटक एन्ड्रोइड मोबाइल सेट बनाउने भएको छ । कम्पनी अहिले सप्टवेयर र डिजाइन बस्तो बनाउने भन्ने काममा जुटिरहेको छ । उसले कस्तो अपरेटिङ सिटस्म प्रयोग गर्ला भन्नेमा..
​एनसेलको दैनिक प्याकमा दुईगुना डेटा भोल्यूम
काठमाडौं । एनसेलले आफ्ना ग्राहकलाई विद्यमान शुल्कमै दैनिक प्याकमा दुईगुना डेटा भोल्यूम प्रदान गर्न थालेको छ ।पुनर्निर्माणको चरणमा डेटाले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकोले ग्राहकलाई सुलभ दरमा थप डेटा उपलब्ध गराउन..
Results 402: You are at page 12 of 14